जुम्लामा एमबीबीएस सुरु गर्न कार्यदल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — सरकारले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कलेज सञ्चालन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले डा. गोविन्द केसीसित भएको सहमतिबमोजिम कार्यदल गठन गरेको हो ।
डा. केसीको पछिल्लो अनशनका क्रममा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएससहितको स्नातक तहमा विद्यार्थी भर्ना सुरु गरी कलेज सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । कार्यदलका सदस्य डा. क्षत्रीले प्रतिष्ठानमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन तथा विद्यमान समस्या समाधान गर्न आफूहरूले सुझाव प्रतिवेदन दिने जानकारी दिए । ‘हामीले जतिसक्दो छिटो स्थलगत अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन दिनेछौं, त्यही आधारमा सरकारले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कक्षा सुरु गर्नेछ,’ डा. क्षत्रीले भने । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नाम दिइए पनि त्यहाँ हाल प्रमाणपत्र तहको हेल्थ असिस्टेन्ट, एनेस्थेसिया असिस्टेन्ट र स्टाफ नर्सको मात्र कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । एमबीबीएसलगायत स्नातक तहको कक्षा सुरु हुन सकेको छैन ।
प्रकाशित : भाद्र ५, २०७५ ०७:२१